कोपा डेल रेमा बार्सिलोना पराजित, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
कोपा डेल रेमा बार्सिलोना पराजित
एजेन्सी । स्पेनिस कोपा डेल रे फुटबल अन्तर्गत अन्तिम १६ को पहिलो लेगमा बार्सिलोना पराजित भएको छ । बिहिबार राति भएको खेलमा बार्सिलोना लेभान्टेसंग २–१ गोल अन्तरले पराजित भएको हो ।
बार्सिलोनाविरुद्ध पहिलो लेगमा जित निकाल्ने क्रममा लेभान्टेका एरिक काबाको र बोर्जा मोयोरलले एक एक गोल गरे । बार्सिलोनाका फिलिपे कौटिन्होले एक गोल फर्काए ।
बार्सिलोनाले कप्तान लियोनल मेस्सी र लुइस स्वारेजलाई विश्राम दिएको खेलमा लेभान्टेले खेलको चौथो मिनेटमै काबाकोको गोलबाट अग्रता बनाएको थियो । खेलको १८ औं मिनेटमा मोयोरलले गोल गर्दै लेभान्टेलाई २–० को अग्रता दिलाए । त्यसपछि खेलको ८५ औं मिनेटमा कौटिन्होले पेनाल्टीमा एक गोल फर्काए पनि बार्सिलोनाको हार टार्न सकेनन् ।
यो हारसंगै क्वाटरफाइनलमा स्थान बनाउन बार्सिलोनालाई दोस्रो लेगमा जित्नै पर्ने दबाब बढेको छ । दुई टोलीबीचको दोस्रो लेग आगामी बिहिबार बार्सिलोनाको मैदानमा हुनेछ ।
कोपा डेल रे अन्तर्गत नै अन्तिम १६ को पहिलो लेगमा सेभियाले एथ्लेटिको बिल्बाओलाई ३१ ले हराएको छ । रियल बेटीस र रियल सोसिडाड भने गोलरहित बराबरीमा रोकिएको छ ।